Guddoomiyaha Gobolka Sh/Hoose oo kasoo horjeestay Go'aan kasoo baxay Maamulka G/Banaadir - Awdinle Online
Guddoomiyaha Gobolka Sh/Hoose oo kasoo horjeestay Go’aan kasoo baxay Maamulka G/Banaadir
Gudoomiyaha Shabeelada Hoose Ibraahim Adan Cali Najax ayaa kasoo horjeestay in degmada Afgooye oo ka tirsan Gobolkaasi Ciyaartoy ka socota ay ka qeyb-galaan tartanka Kubadda Cagta ee degmooyinka Gobolka Banaadir.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay in marnaba aysan jirin Koox ka socota Afgooye oo tartankaasi ka qeyb-galeysa sidoo kalena Maamulka Gobolka Banaadir uusan la soo xiriirin.
“Waa ayaaan darro iyo iska horkeen Bulsho in Degmada Afgooye lagu darro isku aadka tartanka degmooyinka Muqdisho,Maamulka Banaadir horay waxa uu u sameeyay dhacdooyin la xiriira Sohdimaha labadda Gobol oo aan weli indhaha ku heyno, Maamulka Gobolka Banaadir ma jiro xiriir uu innaga nala soo sameeyay oo la xiriirta arrintan,waxaan xaqiijinaynaa inaysan jirin koox kubbadda cagta ah oo ka socota Degmada Afgooye kana qeybgaleysa tartankaas ayuu yiri” Guddoomiye Najax.
Tartanka Kubadda Cagta degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa dhawaan ka bilaaban doona Magaalada Muqdisho, iyada soo sanadkaan markii ugu horreeysay lagu daray degmooyinka Afgooye iyo Balcad ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleMaxkamadda Ciidamada oo xukuntay Nin ka tirsan Al-Shabaab
Next articleCiidamo si awood ah u xirtay mid kamid ah wadooyinka Muqdisho